Abantu baseNtwana baseNingizimu Afrika
I-Kwarrielaagte esifundazweni saseMpumalanga saseNingizimu Afrika yindawo esemqoka yaseNtwana. Kuthengwa kumlimi omhlophe ekuqaleni kwalesi sekhulu, okwakhiwa kweKayrielaagte ukumiswa, njengamasiko, izindlela zokugqoka kanye nemikhuba yobuciko yabakhileyo bayo, kubonisa isikhundla esinqunyiwe somphakathi.
Ilungu ngalinye leqembu linesimo esinikezwe ngokucacile nesimo, ngokusho kokubili kwemvelo nesimo senhlalo ngaphakathi kwezwe elibandayo, elingenalo ukushintshwa kwezindlela zomlando, ezomphakathi nezamasiko.
Ukuhwebelana kwamasiko phakathi kweNtwana nePedi kubonakala ngokufana nokugqoka (abesifazane besifazane abavela kuzo zombili amaqembu bagqoka isithunywa sevangeli-esethulwe njengengxenye yengubo yabo yendabuko), isiko, umkhuba, ukulungiswa kwezakhiwo (amaqembu womabili ahlala ezindaweni zokuhlala zesiNorthern Sotho) ulimi.
I-Ndebele iyaziwa ngokuthi ibuye yabelana ngokubambisana neNtwana, yakhuthaza ngokushada, ukuhlanganyela ngokuhlanganyela emisebenzini yokuqala kanye nokufana nokuhlobisa abesifazane, njengamakhanda amathanga aphethwe ngabesifazane besuka kumaqembu amabili. Wonke amaqembu amathathu aqaphela ukuhlukana okuqinile kwezindima zobulili futhi kuxhomeke emnothweni wezolimo zasemaphandleni ukuze basinde.
NjengesiNgisi iTransvaal nePedi, ngasekupheleni kwekhulu le-19 iNtwana yayibhekene nokuhlukunyezwa kwamakholoni kanye nesistimu yezabasebenzi abafudukayo abaye bachitha umnotho wasezindaweni zasemakhaya. Lezi zimo zomlando zandisa ukugcizelela emagugu namasiko ukuze kugcinwe indlela yokuphila eyaguqulwa.
Igama elithi Ntwana ('onzima kanzima' noma 'umlwi') cishe livela emlandweni ozungeze ikhefu-eliqhamuka eqenjini elincane elivela eBamangwato. Ngokusobala, enye yamadodana enhloko yaphula iphutha ngokuphathelene nokusetshenziswa kwenyama yenkomo. Wabe esexoshwa futhi wahamba neqembu lezihlubuki ngasekupheleni kuka-1 780s ukudala iqembu leNtwana. Namuhla leli qembu lihlala kakhulu endaweni yaseMoutse, eningizimu yeGroblersdal esifundazweni saseMpumalanga.
Nakuba iNtwana yenza iningi labakhileyo eMoutse, le ndawo iphinde ibe nabantu basePedi, eSwazi, iSuthu nesiNdebele. Kuze kube ngu-1986 imiphakathi ehlukene ikhona ngokuthula, ikakhulukazi ukwabelana ngezinhlelo zokubaluleka, ukuhlanganyela ekuhlanganyeleni kwamasiko kanye nokushada. Lokhu kuvumelana kwaphazamiseka ngo-1986 ngokufakwa ngokuphoqeleka kukaMoutse ezweni lakubo lakwaKwaNdebeIe.
I-Ntwana yamelana nokuhlala kabusha; njengoba umphakathi owawungumphakathi wezombusazwe owaba yindlalifa, indawo eDenilton nase Kwarrielaagte yaba yindawo yokulwa, hhayi kuphela phakathi kwamabutho ase-pro- ne-anti-government, kodwa phakathi komakhelwane kanye nemindeni.
Kodwa, phakathi nokuphazamiseka, amasiko amaningi aseNtwana aqhubeka, ikakhulukazi kwabesifazane. Ngaphandle kokuba amadoda abo-abaningi babo basebenza njengezisebenzi ezifudukayo - baphoqeleka ukuba bagcine kokubili umnotho yasemaphandleni ngenkathi beqhubeka nezindima zabo zendabuko njengabafazi nabaphethe abantwana.